Kenya oo dalbatay in dhageysiga kiiska Bada laga saaro madaxweynaha ICJ Cabdiqawi Axmed Yuusuf. - NorSom News
Kenya oo dalbatay in dhageysiga kiiska Bada laga saaro madaxweynaha ICJ Cabdiqawi Axmed Yuusuf.
Dowladda Kenya ayaa war cusub ka soo saartay kiiska Badda ee kala dhexeeya Soomaaliya, kaas oo ay exilian dacwaddiisu hortaallo maxkamadda cadaalada adduunka ee ICJ.
Previous articleNRK: Ereteriyaanku waxey xusayaan, isla sababtii ay sheegteen inay dalkooda uga soo qaxeen.
Next articleHøyre oo 11,3 milyan ka helay ganacsato iyo tujaar, si ay ololaha doorashada ugu galaan.